I-meesme (TURKEY): Amabhishi amahle kakhulu oLwandle i-Aegean | Izindaba Zokuhamba
I-meesme (ETURKEY): Amabhishi amahle kakhulu oLwandle i-Aegean
UMariela Carril | | Ukuphunyuka eYurophu, General, Turkey
I-Aegean Sea igcwele amabhishi amahle kakhulu nezindawo ezinhle zezivakashi ezisatshalaliswa emazweni ahlukene.
Elinye lalawa mabhishi elokuthi Cesme, idolobha elidumile kakhulu ne-spa ehlala emaphethelweni enhlonhlo cishe ngamakhilomitha angama-85 ukusuka e-Izmir, e Turkey. Kwanele ukubona isithombe esithwesa umqhele le ndatshana yokufisa ukuhamba.
1 UCesme, omuhle
2 Yini ongayibona ku-meesme
3 Yini ongayibona ngale kwe-meesme
Igama ngesiTurkey lisho "umthombo" Futhi kunengqondo ngoba kulo lonke idolobha kunemithombo yasendulo yemvelaphi yase-Ottoman neziphethu ezishisayo. Sekuyisikhathi eside indawo lapho abantu abacebile benekhaya lesibili, kepha isikhathi esithile manje inhlonhlo isiphenduke indawo yolwandle yomhlaba wonke.
Hoy Inamahhotela, izindlu eziqashisayo, i-marina, izindawo zokudlela nakho konke okudingwa yinoma yisiphi isivakashi esifuna ukuchitha izinsuku ezimbalwa siphumele lapha. Inhlonhlo yonke ilitshe, ngale kwedolobha elihle, ngoba nxazonke kunamadolobhana amahle, amanye amadolobha amancane nezindawo ezinhle ongazihlola.
Ungafika kanjani lapho? Uma ufika e-Izmir ungathatha ibhasi njengoba kunezinsizakalo eziningana ngosuku futhi zijikeleza emzileni ohlanganisa womabili amadolobha. Ungase futhi ufike ngebhasi esuka e-Istanbul ngemuva kwamahora ayisishiyagalombili wokuhamba noma uma useGrisi, esiqhingini saseChios, ungakwazi bamba isikebhe. Uhambo luyihora elilodwa.
Ngisho kunemizila ye-cruise ethinta i-Çesme , phakathi kwezinyanga zikaJuni no-Okthoba, futhi yingakho inesikhungo samanje sokuhamba ngezikebhe esingatholakala ku-Çesme Castle ngemuva kokuhamba cishe imizuzu engama-20 ngasogwini.
Ngenhlanhla ngaphakathi komuzi umuntu angahamba ngezinyawo. Kuyidolobha elihlangene futhi kulula ukuhamba kulo. Imephu encane yanele, thola inqaba ne-voila, kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Ungathola imephu ehhovisi lezokuvakasha elisogwini, eduze kweCustoms House naphambi kwenqaba. Kusukela ngo-8: 30 izivalo zayo zivulekile.
Yini ongayibona ku-meesme
Kahle amathilomu, izindlu zetiye nezindawo zokudlela kugcwele kuzungeze isikwele esikhulu ukudla ngaphandle, uphumule futhi ubone impilo yezenhlalo yedolobha enemibono emihle nge-Aegean.
El Castleesme Inqaba Kusuka ekuqaleni kwekhulu lesithupha futhi kwakhiwa kabusha nguSultan Beyzit ukuze akwazi ukuzivikela ekuhlaselweni yizigebengu ezazicekela phansi indawo ngaleso sikhathi.
Kuyinqaba enhle kakhulu ye- imibhoshongo eyisithupha nemisele okuyizungeza ezinhlangothini zalo ezintathu. Kusuka ezinqabeni zemibono ukubukwa kwedolobha nolwandle kukhulu futhi ngenhlanhla kuyisakhiwo esigcinwe kahle kakhulu futhi iminyuziyamu yomlando emibili Ziyathakazelisa kakhulu.
Kwesinye sazo kukhona iqoqo elihlobene nedolobha lasendulo i-Erythrai nakwelinye elibhekene nempi yaseTurkey neRussia. Uzobona ngaphambili a isithombe se I-Algeria Ghazi Hasan pasha, umkhuzi odumile womcimbi womlando owaziwa nge-Battle of Çesme, futhi uma uya ngoJulayi kuyisimo esihle somkhosi womculo owahlelwa idolobha.
I-Cesme ingumlando ngakho ukwazi ukuthi inqaba ifaka phakathi hamba edolobheni elidala kwedolobha eliqukethe ukwakhiwa okuningi kwekhulu le-XVIII nele-XIX, lesitayela se-Greek neoclassical futhi eligcinwe kahle. Ngaphezu kwalokho kunezakhiwo zase-Ottoman, ezingajwayelekile, futhi umuntu angahamba ngokuzola kakhulu emigwaqweni yawo.
Imisebenzi yakamuva kakhulu edolobheni igxile ogwini ngoba eminyakeni eyisithupha eyedlule i i-marina entsha, inkudlwana, inamanzi okuphuza amanzi angama-90 kanye nobuningi ezitolo nezindawo zokudlela neziphuzo ngasolwandle.
ENingizimu yedolobha amabhishi amahle kakhulu lapho ungashisa khona ilanga, i-windsurf noma i-kitesurf. Kunamamayela nesihlabathi segolide esingamakhilomitha namamayela kuyo yonke inhlonhlo futhi kuningi ongakhetha kukho, yize ezinye kungafinyeleleki kuzo futhi umuntu uyazibuza ukuthi kuzokuthuthukisa nini ukufinyelela.
Amanye amabhishi athandwa kakhulu futhi kufanele ukhokhe imali yokungena ukuze ube kuwo, lokhu kunjalo ebhishi lase Ulwandle I-Beach Club, ePiyade Cove. Ingabe yini kumele ukubona nokubukwa.
Olunye lwamabhishi amahle kakhulu yi- Pirlanta Ibhishi, ivulekile futhi igolide, eningizimu-ntshonalanga yedolobha, kanti enye Altinkum Ibhishi. Uma uthanda amanzi amnene, kunjalo Isondo Ibhishi, efunwa kakhulu yimindeni enezingane. Okufanayo Buyuk Ibhishi, ngamanzi azolile, sibonga sihlanzekile kakhulu futhi sifudumele ngokusondela kweziphethu ezishisayo, futhi sihlotshiswe ngesihlabathi esimhlophe hhayi ngegolide njengabanye.
Lokhu kwenza ibhishi ligcwale kakhulu, ngakho-ke uma uya ngenkathi ephezulu zilungiselele izixuku. Ukwenza windsurf kufanele uye kude kakhulu Alaçati, enye yezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni zokuzijwayeza lo mdlalo, ngisho nasekhaya emincintiswaneni yomhlaba.
Yini ongayibona ngale kwe-meesme
Akuyona yonke into olwandle, ilanga nokuphumula. Uma ungomunye walezo zivakashi ezisebenzayo, ezingakwazi ukuhlala elangeni isikhathi eside, ungahlela ukuvakasha okuzungezile. Kunezindawo eziningi ezithokozisayo zemivubukulo kule ngxenye yeTurkey.
Eduze yi-spa ngu-Ilica netheku lalo elithambile lesihlabathi esimhlophe namabhavu ashisayo. Cishe ngamakhilomitha angama-20 ukusuka IIdiri, indawo emenyezelwe njengeGugu Likazwelonke ngenxa yakudala, izindonga zalo naphansi kwamatshe asuka enkathini yamaGreki kusakhanya. Futhi uma ukhuphukela e-acropolis yayo ekushoneni kwelanga, yeka umbono!
Dalyan idolobhana lokudoba elisogwini lwamanzi ajulile enyakatho-mpumalanga ye-Çesme. Njengoba ungaqagela, ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokudla izinhlanzi nezinhlanzi zasolwandle futhi ebusuku amathaveni akhanyisa izibani zawo futhi unesikhathi esihle kakhulu.
Sum .ItflikLuphi ulwandle iPirlanta Plaj nolwandle i-Altinkum, eduze nalapho ungamisa khona. Idolobhana lase Alaçcati Muhle, unezinye izivunguvungu zomoya eziguqulwe zaba izindawo zokudlela kanti futhi unamabhishi amaningi.
Urla Iskelesi kungenye indawo esiqhingini futhi kuyafana IGümüldür, iSigacik noma iSeferihisar, zonke izindawo ezinamabhishi namanxiwa asendulo.
Ungathatha ibhasi futhi vakashela i-Izmir, isibonelo, iSmirna endala, ukuhamba ngayo iminyuziyamu yemivubukulo kanye ne-ethnography, ngamanxiwa e- Isithangami SamaRoma, isigodlo nakho konke okwasindiswa empini yaseRussia-Turkish emuva ngawo-20.
Olunye uhambo ongalwenza ukuya ku- yazi i-Efesu, ngokungangabazeki iparele laseMedithera elihlobene nokwedlule kwamaGrikhi namaRoma kule ndawo. Kukhona namanxiwa asendulo IPhergoni, enyakatho neBergama, futhi uma ufuna ukudlulela phambili, hamba uye maphakathi nezwe bese ufika IHierapolis nePammkale ngamanxiwa alo amahle nempophoma yeqhwa, izimpophoma empeleni ezakhiwe nge-limestone futhi ezibonakala zikhukhuleka ngasentabeni. Umbukiso.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Turkey » I-meesme (ETURKEY): Amabhishi amahle kakhulu oLwandle i-Aegean
10 yezindawo ezinhle kakhulu eGalicia